बालबालिकाको उपचारका लागि जानकी मेडिकलमा विशेष व्यवस्था | thesouryamithila
14th September 2021 , 11:33 AM
जनकपुरधाम, भदौ २९ ।
पछिल्लो समय नेपालको तराईसंग टाँसिएको भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यमा बालबालिकाहरुमा भाइरल फिवरको प्रकोप देखिएको छ । ंविश्वभरी कोरोना महामारीको त्रास कायमै रहेको समयमा भाइरल फिवरको. प्रकोप बिहार र उत्तरप्रदेशमा बढेको समयमा नेपालको तराई क्षेत्रमा समेत चुनौती बढेको छ ।
तराई क्षेत्रमा बालबालिकामा देखिने विभिन्न समस्या समाधानका लागि जनकपुरधामको जानकी मेडिकल एण्ड टिचिंग हस्पिटलले बालबालिकाको उपचारका लागि विशेष ध्यान पुर्याउन लागेको छ । हस्पिटललले त्यस्ता बिरामी बालबालिकाका लागि इमरजेन्सी र ओपिडी वार्डमा अलगै व्यवस्था गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै घरमै लगेर पनि बिरामी बालबालिकाको उपचार तथा हेरचाह गर्ने पद्धतिको विषयमा समेत अभिभावकहरुलाई सल्लाह दिने गरेको अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. दिपकराज पौैडेलले बताए ।
अस्पतालमा अहिले कुपोषण, निमोनिया, टाइफाइड लगायतका रोगबाट पीडित बालबालिका बढी आउने गरेको उनले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणको त्रास रहेको समयमा त्यस्ता बालबालिकाका अभिभावकलाई उपचार पद्धतिको विषयमा सल्लाह दिएर घरमै स्वास्थोपचारका लागि पठाउने गरेको चिकित्सक पौडेलले बताए । जुन अभिभावकमा स्वास्थ्य सम्बन्धि ज्ञानको अभाव बढी देखिएको हुन्छ त्यस्ता अभिभावकको बच्चालाई अस्पतालमै उपचार गर्ने गरेको उनले बताए । यसका साथै गम्भिर प्रकृतिका बिरामी बालबालिकालाई अस्पतालमै अलगै व्यवस्था गरेर समेत उपचार गर्ने गरेको उनको भनाई थियो ।